BLU ထုတ်ကုန်များသည်စပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခြင်း Androidsis
ကျနော်တို့ဒီရက်သတ္တပတ်ရေတွက်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ BLU သို့စပိန်သို့ရောက်ရှိခြင်းသည်ပိုမိုနီးကပ်လာသည်။ အမေရိကန်တိုက်တွင်အအောင်မြင်ဆုံးအခမဲ့စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီ။ ထို့အပြင်ဘောလုံးနှင့် Valencia CF တို့ကဲ့သို့ကြီးမားသည့်ဟန်ပြပြပွဲအားဖြင့်၎င်းသည်ရာသီအစမှအစငါတို့နိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
အားလုံး၎င်း၏ခမ်းနားထွန်းလင်းထွက်မတ်တပ်ရပ်တဲ့ catalog နှင့်အတူ ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းအကြားချိန်ခွင်လျှာ။ ဒီဇိုင်းကိုစွန့်လွှတ်စရာမလိုဘဲမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကမ်းလှမ်းသောစမတ်ဖုန်းများကိုရေတွက်ခြင်း။ ထိုအရာတစ်ခုလုံးအတွက်ယူရိုနှစ်ရာအောက်, ၎င်း၏မော်ဒယ်အားလုံးမကြာမီရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
1 BLU သည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောသတင်းများကို Android mid-range သို့ယူဆောင်လာမည်
2 မကြာခင်မှာပဲစပိန်နိုင်ငံမှာ BLU မော်ဒယ်လေးမျိုးရှိလာလိမ့်မယ်
BLU သည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောသတင်းများကို Android mid-range သို့ယူဆောင်လာမည်
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ကိုဥရောပဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သူတို့သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အနှစ်သာရကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကမ်းလှမ်းသည် တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများမှာအရည်အသွေးမြင့်ဆိပ်ကမ်း။ ၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်လက်တင်အမေရိကတွင်အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ဒီဟာကိုစပိန်မှာသာမကဥရောပချဲ့ထွင်ရေးမှာလည်းဆက်ရှိနေ ဦး မည်။
ငါတို့နိုင်ငံမှာပေမယ့် အပြာရောင် မရှိသေးသောဖြစ်ခြင်း၏ထောက်ခံချက်နှင့်အတူတင်ပြနေသည် ယူအက်စ်တွင်အခမဲ့စမတ်ဖုန်းရောင်းအားတွင်ခေါင်းဆောင်များ။ နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးများလွှမ်းမိုးသောဈေးကွက်တွင် BLU သည်စမတ်ဖုန်းရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုပဲ အမြဲတမ်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြီးနောက် - အရောင်းဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြု.
ခရီးစဉ်အသစ်တွင် BLU Products သည်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ကိုသစ္စာရှိရန်ရည်ရွယ်သည်။ AND ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အာမခံ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အထူးပြုပြင်ရေးစင်တာတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ ရုံနှင့်အတူသကဲ့သို့ အပိုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြန့်ဖြူး။ ထို့ကြောင့် BLU စမတ်ဖုန်းကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည်တတ်နိုင်သမျှကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသည်။
မကြာခင်မှာပဲစပိန်နိုင်ငံမှာ BLU မော်ဒယ်လေးမျိုးရှိလာလိမ့်မယ်
ဒီရက်သတ္တပတ်တွေမှာငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ကျနော်တို့မော်ဒယ်များအချို့ကိုစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ ကျွန်တော်တို့မကြာခင်စပိန်မှာဝယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ယခုအချိန်အထိ၎င်းတို့အားလုံးသည်အလွန်ကောင်းသောသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းရန်သဘောတူကြသည်။ The ဘလူး R2, အ BLU Vivo 5R၊ ကျနော်တို့စမ်းသပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းခဲ့ကြသောဤဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုနှစ်ခုသူတို့စက္ကူပေါ်တွင်ထင်ရှားသကဲ့သို့လည်ပတ်မှုအတွက်အဖြစ်အရည်ပျော်ပစ္စည်းဖြစ်ထွက်လှည့်။ အချည်းနှီးမဟုတ်ပါ အမေဇုံမှတစ်ဆင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကရောင်းအားအကောင်းဆုံးသောဆိပ်ကမ်း ၁၀ ခုအနက် ၄ ခုသည် BLU terminal များဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်တွင်ဤကုမ္ပဏီ၏ကောင်းမွန်စွာ ၀ င်ရောက်မှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့်ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အချက်အလက်များမှာသေချာသည်။ BLU သည်သုံးစွဲသူနှစ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုသည်၎င်း၏အကြီးမားဆုံးကြော်ငြာဖြစ်သည်။ ဆိပ်ကမ်းများ သတ္တုချော, SIM က dual, အ အမှုနှင့်မျက်နှာပြင်ကာကွယ်၏ပါဝင်။ အပြင်းအထန်ယှဉ်ပြိုင်မှုကဏ္inတွင်ကိန်းဂဏန်းများကိုထည့်သွင်းရန်အကြောင်းများ။ ကျနော်တို့တရားဝင်ရက်စွဲများမကြာမီရပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » BLU ထုတ်ကုန်များသည်စပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခြင်း